Fatahaada Webiga Shabeelle oo dhib xoogan gaarsiiyey deegaanada Maamulka Hirshabeelle… – Hagaag.com
Fatahaada Webiga Shabeelle oo dhib xoogan gaarsiiyey deegaanada Maamulka Hirshabeelle…
Posted on 29 Oktoobar 2019 by Admin in National // 0 Comments
Waxaa wali soconayo gurmadka loogu jiro bal in la helo raq iyo ruux halkii ay ku danbeeyeen ilaa 11 ruux oo maalintii shalay siyaabo kala duwan Daadku u qaaday.
Dadka meydkooda la arkay ayaa waxaa ka mid ahaa Shariif Carabey oo ahaa Nin dhalinyaro ah oo Ganacsade ah siweynna looga garanayay guud ahaan gobolka gaar ahaan magaalada Beledweyne, wuxuuna ka mid ahaa dadkii shalay la socday Doontii ku rogmatay Biyaha Wabiga.
Wararka ayaa intaa ku darraaya in sidoo kale meydkiisa la helay qof kale oo ka mid ahaa dadkii saarnaa Doonta sida ay inoo xaqiijiyeen shaqaalaha ku howlan gurmadka loogu jiro baadi-goobka dadka ay wax-yaaladu ka soo gaartay Fatahaadda.
Waxaa wali maqan oo war iyo wacaal loo heyn halka ay ku danbeeyeen ku dhawaad ilaa 10 ruux kale oo intooda badan ka tirsanaa shaqaalaha maamulka gobolka Hiiraan gaar ahaan dowladda hoose iyo xafiiska Duqa degmada Beledweyne.
Biyaha Wabiga ayaa saakay u muuqda kuwo ka yara deggan sidii hore madaama xalay aysan wax roobab ah ka da’in gobolka, waxaana ay dadku rajo ka qabaan in biyuhu intan ka sii yaraan doonaan, waa haddii aysan roobab xoog leh ka da’in gobolka iyo dhulka sare ee Itoobiya.
Dhinaca kale Wabiga Shabeelle ayaa fatahaad hor leh ka geystay deegaano ka tirsan Gobolka Shabeellaha Dhexe oo hoos-taga magaalooyinka Jowhar iyo Mahadaay, iyadoo inta badan dadkii deegaanka ee ku sugnaa isaga barakaceen.
Tuulooyin ku dhow 10 Tuulo ayuu saameeyay fatahaada wabiga Shabelle, waxaana ka mid ah Buurfuule, Buulo Sabuun, Muriyaale, Lama-Waab, Xudur Ciise, Kulmis Weyne, sidoo kale xaafado ka tirsan degmada Mahadaay ayuu wabiga ku soo fatahay.
Waxaa laga cabsi qabaa in fatahaada wabiga ay goyso wadada isku xirta Muqdisho iyo Jowhar, kaddib markii daadadka ka dhashay fatahaada wabiga ay gaareen duleedyada magaalada Jowhar.